Guta reHelsinki rinotanga chirongwa chekusimudzira chemuno
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Guta reHelsinki rinotanga chirongwa chekusimudzira chemuno
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Finland Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Zvinoenderana neongororo yakaitwa ne Guta reHelsinki mu2018, zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevagari zvakaratidza dambudziko remamiriro ekunze sekushushikana kwavo kukuru pavanofunga nezveramangwana reguta. Mukupindura, Helsinki akatanga chirongwa Funga Sustainably, yekutanga yepasirose sevhisi inogonesa kuita sarudzo dzakapusa sezviri nyore sekushandisa app.
Funga Zvakadzikama inopa vagari, vashanyi uye varidzi vebhizimusi maturusi anoshanda ekufunga patsva maitiro avo ezuva nezuva uye kuita mararamiro akasimba uye sarudzo dzebhizinesi.
Sevhisi yakasvinwa kuburikidza nechirongwa chepamhepo chinosanganisira maresitorendi, mashopu, zviitiko, zviitiko uye pekugara, imwe neimwe yakatarwa zvichipesana nezvigadziriso zvakagadzirwa neGuta reHelsinki mukubatana nedare rakazvimirira rekufunga Demos Helsinki, mapoka emunharaunda emunharaunda uye nyanzvi dzekuchengetedza. Iyo sevhisi inosanganisirawo nzira yekuronga nzira iyo inogonesa kusarudza emission-yemahara yekufambisa sarudzo kune akasiyana akasiyana ezviitiko zvinopihwa muguta. Iyo nzira yekuronga inopa CO2 emissions mune gramu pamunhu parwendo. Parizvino iri kuunganidza mhinduro kubva kuvashandisi, iyo Funga Sustainably sevhisi inowanikwa pachena nehurongwa hwekuburitsa chirongwa ichi mberi uye kuongorora kukosha kwayo muna 2020.
Maguta anogara inopfuura hafu yevagari vepasi rese uye ndivo vane basa pamusoro pezvikamu makumi manomwe kubva muzana zvepasi rino zvine chekuita nemagetsi zvine chekuita nesimba (C70). Guta reHelsinki rinoziva kuti maguta ari pamberi pakurwisa shanduko yemamiriro ekunze uye nekushandisa marongero matsva. Guta rinoziva nezve kudiwa kwesystemic shanduko mutsika uye chirongwa ichi chazvino chirongwa chekutsigira yayo 40 kabhoni isina kwayakarerekera tarisiro. Mukuvandudza Funga Sustainably, Guta rakaziva iro rakasarudzika iro rinoitwa nemaguta mukugadzira mhinduro dzekugonesa shanduko muhupenyu hwezuva nezuva kugadzirisa dambudziko remamiriro ekunze.
Kaisa-Reeta Koskinen, Director weGuta reHelsinki's Carbon Neutral Helsinki Initiative akati:
“Kuchinja kwekusarerekera kwekabhoni kunoda shanduko huru uye zviito zvezuva nezuva. Sarudzo yemunhu mumwe nemumwe inokosha: Zvinoenderana nedzidzo dzichangoburwa, kuitira kumisa kudziya kwemamiriro ekunze, Finn wese anofanira kudzora kabhoni tsoka kubva pamatani gumi nematanhatu kusvika pamatani mazana maviri negore pagore ra10.3. Kana munhu mumwe chete mudzimba dzemamiriyoni 2.5 aripo muFinland tsoka yavo yekabhoni nezvikamu makumi maviri kubva muzana, tinosvika zvikamu makumi matatu nemasere kubva muzana zvezvinangwa zvakaiswa kuFinland muchibvumirano chemamiriro ekunze eParis chekudzikisa mweya.
Maitiro ekuvandudza iyo Funga Sustainably sevhisi yaisanganisira kutsvagisa zvakakosha zvinhu zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvine chekuita nezvikamu zvakasiyana zvebasa. Izvi zvainyanya kubata nekuburitsa girobhuiti kunokonzerwa nekugadzirwa kwesimba, zvinokanganisa kufamba uye chikafu, kuraswa kwemarara, zvinhu zvine chekuita nehupfumi hwedenderedzwa, kuchengetedza zvipenyu zvakasiyana, kuwanikwa, uye basa nekudzivirira rusarura. Maitiro acho anokurudzira vese vanopa rubatsiro kuti vavandudze maitiro avo kunzira inogara iripo yekushanda uye zvatove nezvakapa kune vanoverengeka vanopa masevhisi kuita shanduko senge kuchinjisa simba uye kudziyisa zvibvumirano kune dzimwe nzira dzinogarisana nharaunda. Chinangwa cheyiyi nzira yaive zvakare yekuwanika kune akasiyana marudzi mazhinji evanopa masevhisi nekuti Guta reHelsinki rinotenda kuti munhu wese anofanira kuwana mukana wekuve chikamu chehombe shanduko.
Tia Hallanoro, Director weBrand Communications & Dhijitari Kubudirira kuHelsinki Marketing akati:
“Vagari vemuHelsinki vanonetsekana zvikuru nedambudziko remamiriro ekunze, vanodarika zvikamu zviviri kubva muzvitatu vedu vanofunga kuti ndicho chinhu chinonetsa zvikuru chiri kukanganisa ramangwana redu. Vazhinji vanonzwa kushungurudzika kuti hapana chavangaite kuzvimisa. Pane kudiwa kukuru kwekushungurudzika kuendeswa mune chimwe chinhu chinogadzira chinotibvumidza kufungisisa mararamiro edu uye mapatani evatengi. Se sevhisi, Funga Sustainably inokupa maturusi ekongiri eiyo. "Tinoda munhu wese ari muchikepe."
Muna Chikumi 2019, Helsinki akagadzwa korona senzvimbo ine hunyanzvi muEU neEuropean Commission, uye iri Guta reEuropean reSmart Tourism 2019. Guta ndiro guta rekutanga reEuropean uye, rechipiri pasi rose (mushure meNew York) kuzvipira nekuzvidira. kune UN mukuitwa kwayo kwe Sustainable Development Goals uye inotungamira nzira mukuyedza nemabatiro ehurongwa uye zvirongwa. Pamusoro pekupa sarudzo dzemahara dzemahara dzemukati meguta, Helsinki inogara kuMutambo wekuyerera, imwe yenyika inotungamira yemimhanzi yekabhoni isina kwakawanda. iyo Nordic dunhu rekutanga zero marara yekudyira Nolla, uye isina-purofiti hwesheni Inopa iyo yakavambwa kurwisa shanduko yemamiriro ekunze nekushandisa muripo wekubhadhara kupa kune epasi rose kabhoni singi mapurojekiti.
Laura Aalto, CEO kuHelsinki Marketing, akati:
"Helsinki ndiyo bvunzo yekuyera yakakwana yemhinduro dzinogona kukwidziridzwa kumaguta makuru enyika. Achishanda seguta remahombekombe eguta, Helsinki anoshuvira kuyedza marongero nezvirongwa zvisingaite kumwe kunhu. Guta rinokwanisa kuita shanduko nenzira iyi nekuda kwehukuru hwayo, mashandiro anoita zvirinani uye rakasimukira musango ruzivo-hupfumi. Helsinki haasati apedza kugadzira marongero ayo akasimba asi akagadzirira kuita nhamburiko dzakasimba, diki nediki, dzinoshanda mukuwana nyika inogadzikana, tinotarisira kuti vamwe vanogonawo kudzidza kubva pakuedza kwedu. ”
Iyo vhezheni yeFunga Sustainably yakatangwa muna Chikumi 2019 ibasa rekutyaira uye parizvino inosanganisira makumi masere nevatanhatu vanopa rubatsiro. Chirongwa ichi chichavezve chakagadziridzwa kuti chibatanidze yakakura yakakura sarudzo yesarudzo kubva kumaresitorendi kuenda kumafambiro.